सपनामा दिशा देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस् - IAUA
सपनामा दिशा देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
ramkrishna April 8, 2021	सपनामा दिशा देख्नु
हामीले दैनिकजसो केही न केही सपना देखिरहेका हुन्छौ । अनि ब्युझेपछि त्यसको बारेमा सोच्छौ । कतिपयलाई सपनाको कुरा बिश्वास लाग्ला त कतिलाई नलाग्ला तर धर्मशास्त्रहरुले सपनालाई एउटा अद्भुत फलका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । सपना किन देखिन्छ भन्ने बारेमा बिभिन्न धारणाहरु पनि पाइन्छ । आज हामी यस्तो सपनाहरुको बारेमा जानकारी दिदैछौ जसले बिपनामा धन प्राप्त हुने गर्छ भनिन्छ । यदि तपाइले यस २० प्रकारका सपना देख्नु भयो भने धन प्राप्त हुन सक्छ ।
दैविक वा शुभ सपनाले काम सिद्ध हुने संकेत गर्छन् । अशुभ सपनाले काम विगार्ने हुन्छ भने मिश्रित सपनाले मिश्रित नै फल दिन्छन् । स्वप्न ज्योतिषका अनुसार रातको पहिलो प्रहरमा देखिउको सपनाको फल १ वर्षभित्र मिल्न सक्छ । दोश्रो प्रहरमा देखिएको सपना ६ महिनामा र तेश्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल ३ महिनामै मिल्छ । चौथो प्रहर अर्थात विहानपख देखिएको सपनाको फल भने तत्काल मिल्ने हुन्छ ।
१. जो व्यक्तिले सपनामा पिशाब, वीर्य, दिशा देखे या खाएको देखे भने त्यस्ता मान्छेलाई पनि धन प्राप्त गर्ने संयोग मिल्छ । साथै आफ्नो प्रेमी प्रेमिका सँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको सपना देख्यो भने पनि त्यसको आधारमा धनप्राप्ति हुन सक्छ ।
१५. जो व्यक्ति सपनामा मोती, गंगा, हार, मुकुट देख्छ उसको घरमा सधैं लक्ष्मीको बास हुन्छ । जसले सपनामा कुमालेले घैँटो बनाएको देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्त हुन सक्छ । जो मानिसले आफुलाई टाउको खुइलिइएको अवस्थामा देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ ।
Previous Previous post: सपनामा मरेको मान्छे देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्
Next Next post: सपनामा कमिला देख्नु के अर्थ हुन्छ ? जान्नुहोस्